Maitiro ekuisa TensorFlow mugore rekutora nhanho nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Hunyanzvi hwekugadzira huri kufambira mberi nekusvetuka uye nemipendero. Iri kuwedzera kusimba uye inogona kushandiswa pamabasa matsva. Iyo muchina kudzidza Ndiyo imwe yeminda yeAI yaunofanira kubhadhara zvakanyanya, nemapurojekiti akaita seTensorFlow. Kana iwe uine sevha kana gore rekutora, iwe unogona kuisa iyi purojekiti ipapo kuti ikupe iko kugona kudzidza pasina chikonzero chekujekesa chirongwa.
Muchidzidzo ichi ini ndicharatidza, nhanho nhanho, maitiro aungaisa iyi yakasimba yakavhurwa sosi projekiti mugore rekutambira. Nezve izvi, ini ndasarudza Clouding sereferenzi, pamitengo yayo, kurerukirwa, rutsigiro muSpanish 24/7, kuwanikwa, mabhenefiti uye, kunyanya, kuve nedata rayo repakati mudunhu reSpanish, muBarcelona. Naizvozvo, ichave iri pasi pemitemo yekudzivirira data yeEurope ...
1 Tensorflow ingabatsira sei bhizinesi rangu?
2 Chii chinonzi TensorFlow?
3 Isa TensorFlow nhanho nhanho
3.1 Gadzira iyo account uye gadzirira iyo Clouding chikuva
3.3 Isa Tensorflow (CPU rutsigiro)
¿Tensorflow ingabatsira sei bhizinesi rangu?
Mune denda, zvave pachena zvakanyanya kuti makambani anoda kuvandudza kukwikwidza. Zvizhinji zverubatsiro rweEuropean zvichaendeswa chaizvo kune ino shanduko yedhijitari. Mabhizinesi ese asina kuchinjika akatambura zvakanyanya kubva pamhedzisiro yezvehupfumi dambudziko iri. Semuenzaniso, kunyangwe mabhizinesi madiki akakurumidza kuchinja kubva pakutengesa chaiko kuenda pakutengesa kwepamhepo, zvichivabvumidza kuti varambe vachishanda vasina kukanganiswa nezvirambidzo.
Technologies senge gore, iyo IoT, kana AI, zvakakosha. Chaizvo, neTensorFlow uye muchina kudzidza, unogona kuwana mabhenefiti makuru. Kudoma mienzaniso mishoma:
Natsiridza mifananidzo uchishandisa AI kana iwe wakatsaurirwa dhizaini kana kutora mifananidzo.
Batsira nezvekurapa kuongororwa nekuongorora mhedzisiro yekuongororwa kwachiremba.
Agile chifananidzo chekugadzirisa uye zvoga zvinyorwa.
Dzidzisa iwe inzwi kana kuzivikanwa kurira.
Kuongorora kumeso, manzwiro, nezvimwe.
Zvoga kukanganisa kuonekwa.
Kuonekwa kwemitauro muzvinyorwa otomatiki.
Kuratidzira huwandu hwezuva nezuva bhizinesi mabasa.
Uye yakareba etc. Iwo maficha anenge asingafungidzike ...
Naizvozvo, ndizvo zvinowanzoshandiswa mumaindasitiri, muzvikamu zvakaita semotokari, zvakare mubazi rezvehutano, muinishuwarenzi, vamiriri vemitero, nevamwe vazhinji vehunyanzvi.
TensorFlow yakavhurika sosi software, yakatanga kugadzirwa neGoogle mainjiniya nevatsvakurudzi, uye yakazoburitswa. Raibhurari yekuverenga manhamba uye muchina kudzidza. Iyo inoshandisa dhata kuyerera mairafu eichi, iwo maodhi anomiririra mashandiro mashandiro, nepo micheto inomiririra multidimensional dhata matrices (tensors) anotaurwa pakati pavo.
Ne software iyi iwe unogona kuvaka uye kudzidzisa chakagadzirwa neural network kuita akawanda mabasa, sekucherechedza uye kujekesa mapatani uye kuwirirana, nenzira inoenderana nenzira iyo vanhu vanodzidza nekufunga.
Iyi purojekiti inopawo yakawanda yekuchinjika, kugona kuita iyo kuverenga uchishandisa CPU kana GPUDzese imwe uye dzinoverengeka dzadzo, paPC, maseva uye kunyangwe nhare mbozha. Izvo zvinogoneka sezvo iri muchinjika-chikuva, uchikwanisa kumhanya pane masisitimu akadai seGNU / Linux, macOS, Windows, iOS uye Android, pamwe newebhu webhu sezvatichaona mune ino dzidziso. Iyo kunyange ine akati wandei machira ekushandisa akasiyana ekuronga mitauro: Python, C ++, kana Java. Zvese zvine imwechete API.
Isa TensorFlow nhanho nhanho
Chinhu chinotevera kuratidza nhanho nhanho muenzaniso wekuti sei gadza TensorFlow en gore rinotambira. Kuti ndiite izvi, ini ndinoshandisa VPS ye Clouding.io, uko iwe kwaunogona kusarudza ese maWindows neLinux anoshanda masystem. Ehezve, uchipiwa dingindira reblog uye mabhenefiti eGNU / Linux, hapana mubvunzo kuti ini ndichave ndakavakirwa pane Linux distro.
Gadzira iyo account uye gadzirira iyo Clouding chikuva
Usati watanga, unofanirwa kunyoresa kuti uwane kuwana sevhisi inopihwa nemupi uyu uye nekudaro nakidzwa € 5 yemahara kiredhiti vanopa kuyedza chikuva. Izvo zvichave zvakapusa sekutevera nhanho dzakaratidzirwa kuongororo yeaccount. Zvinongotora mineti.
Mushure mezvo, unofanira kudzokera kune webhusaiti yepamutemo yeClouding uye pinda kuisa zita rako rekushandisa uye password:
Iye zvino unogona kuona iyo Clouding control panel, iyo sezvamuchaona iri yakapusa uye intuitive kushandisa. Kunyangwe usina ruzivo rwakawandisa iwe unogona kuzvibata pasina dambudziko nekutevera iyi dzidziso. Kutanga gadzira muenzaniso weTensorFlow, wokudhinda Dzvanya apa kuti ugadzire yako yekutanga server:
Izvo zvinokutora iwe kuenda kumenu ye kumisikidzwa kweseva yako. Chinhu chekutanga chichava kutumidza yako VPS, unogona kusarudza iyo yaunoda. Ipapo iwe unofanirwa kusarudza iyo OS. Kune ino dzidziso ini ndinosarudza imwe yeiyo distros iyo yavanopa (CentOS, Ubuntu Server, Ubuntu Desktop kana Debian). Unogona kusarudza iyo yaunoda, mune yangu ini ndichasarudza Ubuntu Server 20.04:
Mushure mekusarudza iyo base system, inotevera iri gadzirisa mamwe maparamende izvo zvinoonekwa pane iwo iwo iwo peji pazasi. Sezvauri kuona, pakati pesarudzo dzekumisikidza dzemamishini iwe unogona kusarudza huwandu hwe RAM, vCPU cores, kana iyo SSD yekuchengetedza nzvimbo yaunoda. Nezve TensorFlow pachayo haudi kuzoda zvakawanda, asi zvinogona kuti kune iyo yese data iyo yaunofanira kubata hongu, saka, funga zvakanaka izvo zvaunoda (zvisinei, zvinogona kuyerwa):
Izvo zvakare zvakakosha kuti iwe ugadzire iyo SSH kiyi, uchipa chero zita raunoda. Izvi zvinokutendera kuti utore vaviri vacho kuti vakwanise kuwana zviri kure pasina kuisa password manowani nguva dzese dzaunoda kupinda. Uye zvakare, iyo zvakare inokutendera iwe kumisikidza iyo Firewall kana backups. Mune ino kesi, zvese backups uye firewall isu tinoisiya sezvazviri.
Kana wapedza, tarisa kuti zvese zvakanaka uye Press Eviar. Izvo zvinokuendesa iwe kune imwe skrini neako gore remwaka rakagadzirwa. Asi muchikamu chechimiro uchaona kuti iri kugadzirwa:
Mukubwaira kweziso, system yako ichaiswa uye kugadziridzwa. Ipapo chinzvimbo chichaonekwa se Active. Uye unogona kuishandisa kare.
Dzvanya pazita re server yako pachiratidziri ichi uye zvinokutora kuenda kune pfupiso ine ruzivo:
Kana iwe ukapukunyuka, iwe uchawana chikamu Maitiro ekuwana sevha. Izvo zvakakosha, nekuti apa ndipo paunowana zvese zvaunoda kuti uwane uye gadzirisa server yako. Semuenzaniso, unogona kurodha pasi SSH kiyi, kana iwe unogona kuona yeruzhinji IP kuti isvike neSSH, iro zita rekushandisa (mudzi), uye password yekuwana:
Usarase iyi data, sezvo iwe uchizoida mumatanho anotevera kutanga kuisa Tensorflow pane yako Clouding semuenzaniso.
Kuti utange, chinhu chekutanga kuita kugutsa kumwe kutsamira kana mapakeji ayo anobatsira kuTensorflow, pamwe nekugadzirisa kuona kuti zvese zviri mushanduro yazvino. Kuti tiite izvi, tichaenda kunopinza chinhambwe kuti tivabatanidze neSSH ne password neIP iyo yandakaratidza mumufananidzo wekare kuti uwane mukana uri kure kubva kudistro yako (rangarira kutsiva youripdelserver neIP yeiyo Clouding semuenzaniso) :
Ichakukumbira iwe password yemuenzaniso iyo iwe yaunofanira zvakare kupinda uye iyo inokupa iwe kupinda. Iwe uchaona kuti iyo kukurumidza kwetemu yako haisisiri yako yemuno, asi iwe uri mukati megore server. Naizvozvo, mirairo yese yaunomhanya kubva zvino zvichienda mberi inozoshanda pane izvozvi kwete pane yako yenzvimbo system.
Zvino chinhu chekutanga ndechekuti simudzira system nemirairo inotevera:
apt-get update &amp;&amp; apt-get -y upgrade
Zvino, unofanira gadza python3 uye mamwe mapakeji ebetsero auchazoda:
apt-get install python3 python3-pip python3-dev
Izvi zvinotevera gadzirira iyo chaiyo nharaunda, uchishandisa iyo modalenv module, inova chikamu chePython3 raibhurari yakajairwa:
Mushure meizvozvo iwe uchaona kuti yako Prompt yachinja, uye ikozvino zvinoratidza tf-env pamberi pezita rekushandisa uye inomiririra.
Isa Tensorflow (CPU rutsigiro)
Zvese zvakagadzirira iyo Kuisa kweTensorFlow mune yako Clouding muenzaniso. Nhanho inotevera yekutevera ichave iri:
Kana ichinge yaiswa, unogona chengetedza kuiswa uchishandisa unotevera kuraira:
python -c ‘import tensorflow as tf; print(tf.version)’
Uye izvo zvinofanirwa kukudzosera iwe chakaburitswa neshanduro yeTensorflow yakaiswa. Kubva ipapo, waigona tanga kushandisa Tensorflow kune chero basa raunoda ...
Mukupedzisa, zvivakwa zvinopihwa neClouding kuti zvishande neVPS yayo zvinoita kuti ruzivo rwekuisa chero chirongwa seTensorflow, kana kugadzira masisitimu, chive zviri nyore sekuzviita pamushini wako wemuno. Chete nesimba uye nekukwanisa kwerudzi urwu rwe server.
Uye zvakare, iro rinodzora pani inonzwisisika uye mubatsiri anokutungamira iwe kunyangwe iwe usina ruzivo rwehunyanzvi. Kune rimwe divi, sarudzo dzaunokupa iwe zvakare inoshanduka-shanduka, kugona kusarudza zvese zviri zviviri zvigadzirwa zvehardware zvaunoda, pamwe nehurongwa hwekushandisa. Uku kuita kwakawanda kunoita kuti inyatsoenderana nezvido zvako, zvisinei nekuti vangave vakanyanya sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuisa TensorFlow pane gore rinotambira
Encrypt USB memory muLinux zviri nyore